Mandoro ny rivodoza biocomb - Kinne Maskinteknik AB
Solon'ny solika fandrehitra miaraka amin'ny fanalefahana ny mpanangona menaka.
Ao amin'ny fandoroana rivodoza Biocomb, mandrehitra solika toy ny an'ny mpandoro menaka ny solika. Ireo mpamono rivo-doza biocomb dia afaka manolo ny mpandoro solika ao anaty fametrahana efa misy. Ny fiovam-po avy amin'ny solika mankany amin'ny solika solika dia tanterahana amin'ny alàlan'ny fandalovan'ny rivodoza mankany amin'ny toerana nalehan'ny mpandoro solika. Tahaka ny kitay fandrehitra solika, ny fandalovan'ny rivodoza tanteraka dia nanomboka fanombohana sy fampiatoana ny filaharana. Ny faritra misy fitsipika mifehy hatramin'ny 20% amin'ny herin'ny tsena dia manome hetsika ara-toekarena sy maotera. Ny kitay fandalovan'ny rivodoza dia azo ariana amin'ny solika matevina isan-karazany, ohatra ny mololo, otrikazana, kitay vita amin'ny hazo ary koa ny fambolena toy ny fambolena, indostrialy ary trano fako. Ny fepetra takiana amin'ny solika no ampiasaina dia ny fitaovam-pitaterana pneumatically izay mety ho tratra amin'ny alàlan'ny fikapohana, famotehana na fametahana ny fitaovana. Ny fanomanana ny solika no azo atao ho ampahany amin'ny fitantanana ny solika ao amin'ny orinasa.
Ny mpandoro dia manomboka amin'ny menaka. Avy eo, ny solika mavesatra dia mitsofoka tampoka ao amin'ny efi-trano fitotoana cylindrical. Mandritra ny fametrahana ny lavenona dia apetraka ao ambadiky ny efitrano fitotoana ny lavenona, izay ahitan'ny mpamongotra lavenona miadana ny famonosana ny lavenona avy amin'ny rindrina ho any amina baomba iray ary avy ao amin'ny alàlan'ny rafitra fanalahidy ary ny sakam-pitaterana mankany amina boaty lavenona.
Raha misy antony manelingelina ny famatsiana solika solika dia miverina mandeha ho azy ny fandidiana solika mba hiantohana ny famatsiana angovo ho an'ny mpanjifa. Izany dia miantoka ny fisian'ny avo be. Ilay mpamono afo dia mifangaro betsaka amin'ny herin'ny haavo avo be izay alain'ny fifangaroan'ny rivotra / solika tena tsara. Izany, miaraka amin'ny fatiantoka hafanana kely amin'ny tontolo iainana, manome mari-pahaizana famolavolana avo lenta ary fahombiazana avo lenta avoaka.
Fananganana hentitra misy ampahany mihetsika.
Ny fiovan'ny rivodoza sy ny fiasa
Vita vita amin'ny vy ny baoritra fandoroana rivodoza. Ao anatiny, ny efitrano fitotoana dia ilaina amin'ny seramika, ao anaty palitao misy vato sy amin'ny gable sy outlet miaraka amin'ny masinina simenitra. Ny kalitaon'ny seramika dia ampifanarahana amin'ny fepetra misy rehefa handoro ny lasantsy tsirairay avy.
Ny rivotra mitsoka dia entina ao anaty lavaka ivelany an'ny mpandoro ary ny habakabaka dia fehezina amin'ny alàlan'ny dampers izay hita ao amin'ireo tsangadin-tsolika. Izany dia hiafara amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta sy ny korontana mahery vaika. Ny endrik'ilay efitrano fitotoana dia manome rivotra mihetsika mankany amin'ny farany ary mivoaka amin'ny afovoan'ilay mpandoro.
Ny biofuel dia pneumatically dia alefa any amin'ny efitrano fitotoana. Ny fitrandrahana solika dia misy toerana azo tsapain-tanana ary alefa amin'ny rivotra ny kitay ao anaty rotaka ny solika
hetsika mankany amin'ny faran'ny farany. Ny fihodinana dia midika fa mijanona ao anaty periphery ny singa solika ao mandra-pahatonga azy ireo. Ny fatra dia marina ary mifanitsy hatrany amin'ny fihanaky ny fihanaky ny rivotra.
Fanombohana mandeha ho azy ny fandalovan'ny rivodoza, amin'ny alàlan'ny fanombohana ny fandoroana menaka fandoroana afo miaraka amin'ny herinaratra 70 kW ary aorian'ny 5
minitra averina amin'ny laoniny ny paompin-tsolika, izay am-pahombiazana mampitombo ny herinaratra amin'ny 50% amin'ny fahefana nomen'ny mpandoro. Taorian'ny 5 minitra famerenam-bavan'ny XNUMX minitra dia manomboka ny famatsiana biofuel. Mihamitombo ny fikorianan'ny biofuel rehefa mihena ny fikorianan'ny solika miverina mandra-pahatongany tanteraka ary avy eo ny fitrandrahana biofuel dia voafehy amin'ny filàna herinaratra.
Mandritra ny fandoroana ny lavenona dia arotsaka tsy ho ela ao aoriana ao amin'ny efitrano fandoro. Avy eto, ny lavenona dia esorina miaraka amin'ny lavenona miadana, mihamangatsiaka amin'ny rano ary mifindra amin'ny tohatra ambany. Amin'ny alàlan'ny rafitra fanalahidy dia latsaka ao anaty rano ny lavenona. Avy amin'izany, izay miasa toy ny fandrika rano, ny lavenona dia mitondra miaraka amina sakam-pitaterana mankany anaty boaty lavenona.
Famolavolana tokana ho an'ny toekarena angovo tsara kokoa.
Soa ihany fa ny fangaro ny fôma sy ny setroka "zandriny", ny karazana biofuel dia mamoaka gazy misy gazy karbonika sy rano miaraka amin'ny famoahana azota.
Ny fikorontanan'ny biofuel, tsy toa ny famonoana solika fôsily, dia tsy manova ny atiny misy karbonika any amin'ny habakabaka raha toa ny zavamaniry mitrandraka karbona sy mandefa oksizenina mandritra ny vanim-potoanan'izy ireo. Ny fanaovan-tena dia dingana be pitsiny izay misy fihetseham-po mitohy matetika mifehy amin'ny lafiny ivelany sy anatiny.
Amin'ny fitomboana, ny sombin-tsolika iray dia mizaka henjana amin'ireto fizarana manaraka ireto; ny fandroahana ny mpizaka solosaina / fandefasana entona ary fandefasana farany ny sisa amin'ny karbon. Izany hoe, ny lasantsy dia avadika ho entona mifototra izay mihetsika bebe kokoa amin'ny oksizenina ho karbona sy ny rano. Ireo fanehoan-kevitra ireo dia mitaky fotoana sy mari-pana ny oksizenina.
Amin'ny fampiharana ara-teknika, ny ampahany betsaka amin'ny gazy karbonika sy ny hydrocarbon dia hita ao amin'ny gazy manidina. Ny karbonina monoksida ao amin'ny gazy flue dia fatiantoka, satria misy angovo. Ny gazy karbonika dia mihetsika ao anaty habakabaka amin'ny fitrandrahana karbôna.
Ankoatra ny fahaverezan'ny fahavoazana dia manimba ny olombelona ny hydrocarbons. Amin'ny ankapobeny, izany dia mihatra amin'ny habetsaky ny hydrocarbons organika mahazatra ary indrindra ny poly aromatic.
Ny mpandoro biocomb dia manome hydrocarbon azo tsinontsinoavina ary ambany indrindra ny fitran'ny karbônôma ao amin'ny gazy manidina noho ny mari-pana avo, ny fifangaroan'ny rivotra / solika ary ny fotoana hipetrahana.
Ny hafanana miady dia miankina amin'ny lanjan'ny hafanana sy ny hamandoana hamandoana, ny mari-pana amin'ny rivotra manangona sy ny fihoaran'ny rivotra tafahoatra, ary koa ny habetsaky ny angovo esorina amin'ny lelafo amin'ny alàlan'ny taratra sy ny fiantsoana. Ny mpamono Biocomb dia mahatratra ny mari-pana avo lenta noho ny habakabaka ambany sy ny fatiantoka kely.
Ny fisian'ny azota azota ao amin'ny rivotra ary amin'ny fatran'ny solika no ahafahana mamorona oxides nitrogen. Ny fitrandrahana nitrika oksizenina dia mitombo ary mitombo ny mari-pana ary mitombo ny fihoaran'ny rivotra betsaka. Mitombo ny atiny oksizenina Nitric miaraka amin'ny fotoana fitomboan'ny trano Nitric oxide dia mamitaka ny asidra tany sy ny fahafatesan'ny ala. Ny hafanan-doko rehefa mandoro biofuel miaraka amin'ny votoaty hamandoana mahazatra dia ambany ny habetsaky ny famoronana azota azota. Ny fandoroana biocomb dia manome ny famotsorana oksizena azota ambany noho ny rivotra ambany be sy ny fifangaroana rivotra / solika tsara. Ny mpamono biocomb dia manome ny famotsorana gazy aziôma na dia miaraka amin'ny solika aza izay manome hafanana avo lenta noho ny fahafaham-po mora amin'ny fampidinana an-tsokosoko ny fitrandrahana solika.
Ny ankamaroan'ny solika azo ampiasaina dia azo ampiasaina amin'ny fandoroana biocomb. Ny fepetra dia ny haben'ny sombiny dia manome fitaterana mitohy ny fatra sy ny pneumatic fitaterana. Amin'ny fametrahana tokana na crusher eo amin'ny zavamaniry dia azo tojo karazana arika io. Ao amin'ny zavamaniry iray, misy karazana solika afaka ampiasaina aorian'ny fanitsiana mora foana ny fatra ary ny rivotra tena ilain'ny rivotra dia arotsaka ao anaty rafitra fanaraha-maso.
Ny lavenona solika rehetra dia misy lavenona. Ny mari-pana amin'ny fananganana ny lavenona dia hafa noho ny lasantsy ka ny solika ary mety miankina amin'ny toerana itomboan'ny solika ihany koa. Ny mpandoro Biocomb dia tsy mahazaka ny lavenona rehetra. Misy ihany koa ny elanelan'ny lavenona ary ny habetsaky ny tsy fahitana amin'ny lavenona tafasaraka. Ny lavenona kely manary ny mpandoro ho lavenona manidina matetika dia tsy misy voavaha.
Fiovam-po sy fametrahana vaovao
Ny famolavolana famoronana biocomb, ny fisarahana lava be ary ny fandoroana menaka toy ny lelafo dia tena mety amin'ny famindrana ireo boay mandrehitra solika ho solika.
Amin'ny alàlan'ny fanomezana ny ampahany amin'ny boiler amin'ny turbulators, dia afaka manome ny tanjaka vokatra mitovy amin'ny menaka ihany koa izany. Ho an'ny fametrahana vaovao dia azo ampiasaina ny fikarakarana boiler mahazatra natao ho an'ny fandoroana menaka, izay miteraka ny vidim-bola ambany.
Ny fanaraha-maso sy fanaraha-maso dia natao amin'ny fomba toy ny fikarakarana tsotra toy ny eo amin'ny fandoroana menaka. Ankoatr'izay, manome ny control biocomb ho an'ny 20% amin'ny herin'ny marika io. Ny habetsahan'ny solika ao anaty burner dia tsy mitaky ny fitaovana ho an'ny fandoroana na koa vonjy maika.
Ny mpandoro Biocomb dia manana endrika tsotra sy hentitra misy ampahany kely mihetsika. Ny fitaovana hafa amin'ny fametrahana iray manontolo dia fantatra, haitao tsara, izay manome rafitra tsotra sy azo itokisana miaraka amin'ny vidin'ny fampiasam-bola sy ny fikojakojana, raha toa ny kalitao azo ampiasaina dia avo. Ny fahafaha-mampiasa mora foana karazana solika ao amin'ny kitapo Biocomb miaraka amin'ny tombony hafa dia manome refy vaovao vaovao ho an'ny famokarana angovo - toekarena angovo tsara kokoa.
Ilay mpandoro rivodoza mandeha ho an'ny solika mahery vaika isan-karazany: mololo voavelea, mololo voa-voosotra, famafazana varimbazaha, sakamalaho, fikosoham-bary, tsaramaso, briquette, vatan-kazo, fako, fako indostrialy.
Ny tantara ao ambadiky ny fandoroana.
Faritra fampiharana ho an'ny mpandoro rivodoza
Ny mpandoro Biocomb dia napetraka eo amin'ny boiler telo-tampon-taolana ho an'ny famokarana rano mafana, rano mafana na etona.
Ny kitay Biocomb dia apetraka amin'ny efitrano mifangaro ho an'ny famokarana gazy mavitrika mafana ho an'ny tanjona fanatanjahantena samihafa.
Solon-trondro biômita napetraka amin'ny gazy fl / rivotra hafanana ho an'ny fandroana na fanamainana.